बिरामीलाई किन हिस्टेरिया भनेको मन पर्दैन ? – List Khabar
Home / समाचार / बिरामीलाई किन हिस्टेरिया भनेको मन पर्दैन ?
बिरामीलाई किन हिस्टेरिया भनेको मन पर्दैन ?
admin February 12, 2022 समाचार Leaveacomment 151 Views
हाम्रो समाजमा हिस्टेरिया शब्दको गलत अर्थ लाग्छ । हिस्टेरिया यौन इच्छा पूरा नहुँदा हुन्छ भन्ने गलत धारणा छ । कसैलाई हिस्टेरिया भयो भन्दा गाली पनि पाउन सकिन्छ । हिस्टेरिया यौनका कारणले मात्र हुँदैन, मानिसको जीवनमा हुने कुनै पनि तनाव दिने घटना वा पीडादायक घटनाले गर्दा हुन्छ । यस्ता पीडादायक घटना हाम्रो बेहोसी मस्तिष्कमा बसेका हुन्छन् । पीडादायक कुरा शारीरिक लक्षणका रूपमा बाहिर निस्कन्छन् । त्यसैले अहिले यसलाई कन्भर्सन डिसअर्डर भनिन्छ र हिस्टेरिया भन्न छाडिएको छ । तनाव शारीरिक लक्षणमा परिणत हुने हुनाले यसलाई कन्भर्सन डिसअर्डर भन्न थालिएको हो ।
कतिपय बिरामीमा यो समस्या बारम्बार दोहोरिन सक्छ तर आत्तिनु हँुदैन । २–३ हप्तामा यो समस्या बिस्तारै ठीक हुन्छ ।
बिरामीको लक्षणलाई वास्ता गर्नु हुँदैन, वास्ता गरे यो रोग अझ बढ्न सक्छ ।
मनभित्र पीडादायक वस्तु बस्दा यस्तो हुन्छ । जुन बिरामीलाई थाहै हुँदैन ।
कतिपय बिरामीलाई बोक्सीको आरोपमा कुटिन्छ, जुन शतप्रतिशत गलत हो ।
सामान्यत: १०–१३ वर्षको उमेरसम्ममा हरेक किशोरीमा महिनावारी सुरु हुन्छ, तर यही उमेरसम्ममा हुनैपर्छ भन्ने छैन । कसै–कसैमा महिनावारी ढिला सुरु हुन सक्छ । त्यसैले महिनावारी भएन भनेर आत्तिहाल्नु पर्दैन । महिनावारी नहुने यो समस्यालाई प्राइमरी एमोनेरिया भनिन्छ । समयमा महिनावारी सुरु नहुने अनेकौं कारण छन् ।
कुनै खराबीबिना पनि कहिलेकाही महिनावारी ढिला हुन सक्छ । वंशानुगत, पोषण, वातावरण, शारीरिक व्यायाम, मानसिक तनावजस्ता कारणहरूले पनि महिनावारी ढिला भएको हुन सक्छ । त्यसैले कुन कारणले गर्दा महिनावारी नभएको हो ? पत्ता लगाउनुपर्छ ।
महिनावारी नहुने महिलाले सन्तान जन्माउन सक्दैनन्, तर कारण पत्ता लगाएर उपचार गराएको खण्डमा धेरैजसोले सन्तान जन्माउन सक्छन् ।
Previous घरको यो दिशामा राख्नुहोस् यस्तो धातुको कछुवा, अवश्य चम्किनेछ तपाँईको भाग्य !
Next टाटा सुमोलाई प्रहरीले बिच बाटोमै शंका लागेर चेक जाँच गर्दा…